सभामुख अग्नि सापकोटा किन आत्तिए र किन रिसाए ? « dainiki
२३ भाद्र २०७८, बुधबार १६:५९
सभामुख अग्नि सापकोटा किन आत्तिए र किन रिसाए ?
२३ भदाै, काठमाडाैँ । संघीय संसदको नवौँ अधिवेशन बुधबार अपरान्ह ठीक चार बजे सुरु भयो । राष्ट्रिय गान बजिसकेपछि सभामुखले ‘आजको बैठक प्रारम्भ हुन्छ’ भन्दै राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन थाले । पत्र पढ्न सुरु गरेलगत्तै एमाले सांसदहरु उठेर टेवुल ठोक्न थाले । टेवुल ठोक्न थालेलगत्तै सभामुखले एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई बोल्ने अनुमति दिए ।
प्रकाशित मिति: २३ भाद्र २०७८, बुधबार १६:५९